Si fudud oo - Lacag lagu diri karo ehelkaaga | Su'aalo iyo jawaabo | Transfer Galaxy
Waa maxay TransferGalaxy?
TransferGalaxy waa adeegga xawilaadda lacagta interneetka oo kuu suurtagelineysa inaad lacag u diri karto ehelkaaga goor kasta iyo goob kasta, adigoo adeegsanaya Computer-kaaga, Tablet-kaaga ama Mobile-kaaga. Qofka loo dirayona wuxuu ku heleyaa lacagta iyada oo lacagta teleefoonkiisa lagu shubo.
TransferGalaxy waxay ku hawl yarey naysa inad dirto lacag ugu qiima jaban dhamaan xawilaadaha.
Sababta aan anigu u isticmaala adeegina waa maxay?
TransferGalaxy waa sida kuugu haboon in aad lacag u dirto caalamka oo dhan. Nafiska gurigaaga ama xafiiskaaga ayaad ku raaxaysan kartaa addeegyadan:
Heerarka sarifka ugu fiican: Si toos a ayaan kuugu so gubin heerka sarifka fiican si qaatayaashaagu mar walba wixii lacagta ugu badan qataan.
Ajuuro riqiis ah: Anagu waxaanu leenahay ajuurada ugu riqiisan ee lagu diro lacagta hawada.
Amaan iyo Asturnaan laguugu ballanqaadayo: Web-saytkayagu wuxuu isticmaalaa farsamada amniga ee DigiCert oo ku jirto SSL oo ah ta ugu sareeysa, habeynta ogolaashada, qiyaasta waxyeelka iyo raaditaanka waalware.
Dhowaan & Fudeeyd: Waxaad lacag ka diri kartaa telefoonada casriga ah, Ey-baadyada ama komboyuterka xilli walba maalin ama habeen. Waxaad xitaa ka soo dajisan kartaa App Store ama Google Play Brograamkayaga cajiibka ah.
Fursada lacag bixinta: Waxaad ku bixin kartaa lacagta adiga oo isticmaala kaarkaaga bangiga.
Tageero telefoon iyo qoraal onleynka ah: Online waxan nahay Isniin-Jimco 9-21, Sabti-Axada 12-19. Waxa aad nagu heli kartaa telefoon, E-meyl ama qoraal onleynka ah.
Waa maxay adeega aadan soo bandhigin?
Nasiib darro TransferGalaxy lacag kaash ah ku ma aqbasho in lagu bixiyo adeega dirida lacagta. sababta oo ah in aanu nahay ganacsi internetka ah, taas oo keeneysa in ay aad u adkaato in aad lacag gacanta noogu keento.
Amaan ahaan aad bey muhiim u tahay in öa ogaado meesha ay lacagtu ka imanayaan inta aan dibadda loo dirin, taas oo aad u adkaata hadii lacgtu kaash tahay.
Maa lagu aamini karaa in hawada lacag lagu diro?
Dirrida lacagta la marinayo TransferGalaxy waa mid aad u ammaan ah.
Marka hore waxaan hubsanay aminga ay web-saytkayaga. Waxaan isticmaalnaa farsamada amniga oo kuu hubineysa in kombuyuterkaagu ama telfoonkaaga casriga uu la xiriirayo TransferGalaxy oo kaliye marka xiriirka sistamkayaga la ogolaado.
Cid walba oo aan la wada shaqeyno ee nala qabata kala wareejinta lacagaha waa in uu farsamada amaanka ee aad loo adkeynayo ay wada waafaqsanadaan.
In lacagta laga diro web-saytkayaga ayaa ka amaan badan intii lacag tiro badan oo kaash ah loo qaadan lahaa xafiisaska xawaaladaha, oo weli dad sameeyaan.
Anigu lacag baan direy, maxaa dhici doona kadib?
Aad baanu u fahsamsanahay in ay muhiim kuu tahay in aad ogaatid wixii ku dhacay lacagta mark aad gujisid dir.
Labadiinaba adiga iyo qaataha ogeysiis E-meyl/SMS ah ayaad heli dontaan si aad u ogataan in lacagtii ay dirantay.
Laadiinaba waxaad heli dontaan ogeysiis marka lacagta la diray gaarto qaataha.
Adigu waxaad cawimaadka macaamiisha ee TransferGalaxy kala socon kartaa diritaankaaga adiga oo kala xiriira E-meylkan support@transfergalaxy.com
Halkee ayaan lacag u diri karaa?
TransferGalaxy waxay kuu soo bandhigeysaa in aad 30 wadan lacag u dirto.
Waxaad dooran kartaa wadanka aad robto in aad u dirto intaad gashid transfergalaxy.com oo ka dooratid “U dir” beegta soo dhacaysa.
Qaatuhu lacagta wuxuu ku heli karaa iyada oo telefoonkiisa gacanta loogu shubo.
Waxaan rabnaa in aad cid walba u soo bandhigi karno fursad oo had iyo jeer waan ku soo biirinaa waddano kale oo loo diri karo ama laga qaadan karo.
Halkee ayaan lacagta ka diri karaa?
TransferGalaxy waxay kuu soo bandhigeysaa in lacag laga diro karo Europe oo dhan.
Macaamiishu wadanka ay ka soo direyso waxay dooran marka ugu horeeysa ee ay akoonkooda TransferGalaxy galaan.
Ammaanka darteed Dalkaaga ka direysid kuma badalkertid webseytka oo hadii aad u baahatid in aad wadanka badashid fadlan halkan agala soo xiriir support@transfergalaxy.com
Sababta waa maxay in aan lacag dal gaar ah u diri kari waayo?
TransferGalaxy waxay kuu soo bandhigey in aad lacag u dirto waddano badan. Waxaanu had iyo jeer ku soo biirinaa qaar kale.
Hadii aanaad arkin wadanka aad rabtay, akoon ka sameyso TransferGalaxy oo waanu kuu soo diri E-meyl markaan meelo kale oo loo diro ku soo biirino.
Lacag intee ah ayaan diri karaa?
Si aad u eegtid xaddka khuseeya lacag diridd gaar ah waxaad ku qoreysaa kaliye tririyaha “U dir” qiimaha aad rabtid in aad dirtid. Halkaas ayaad ka arki kartaa hadii aad xaddkii ugu badnaa in aad ka badnaatay.
Sidee baad u furi karta Akoonkaga?
Arinkan ma quseeyo macaamisha Swedishka ah, iyagu waxay isticmali karaan (Mobile BankID).
Si aad u furtid akoonkaga, waxa lagaaga baahan yahay sawirka aqoonsiga oo tayo sare leh. marka aad is diiwan galiso ee aad samaysato akoon kadibna aad gashid waxa lagu waydiin doona inaad cadaysid aqoonsigaga. Fadlan raac talaabooyinka lagu siyey.
Hadii aad dhib kula kulantid gellida akoonkaaga fadlan ku soo dhowoow in aad nagala soo xiriirto support@transfergalaxy.com ama soo wacdo +46 10 410 29 00.
Sababta aan u baahanahay in aan aqoonsigayga xaqiijiyo?
Macaamiisha swedishka ah waxay isticmali karan (Mobile BankID) markas iyaga uma baahna inay cadeeyan aqoonsigooda.
Waxa waajib nagu ah inan ilaalino oo xifdino dhaman macamishayada macluumaadkooda. waydiinta aqoonsigana waxay cadaynaysa in la xaqiijiyo qofka lacagta diraya oo la hubiyo in qofka uu shegtay uu yahay. waxana na faraya sharciga inaan hubinta samayno.
Marka aad samaysatid akoon kadibna aad gudaha gashid, waxa lagu waydiin doona in aad cadaysid aqoonsigaga. raac talaabooyinka ku qoran shaashada si aad u xaqiijisid akoonkaga kadibna u furatid.
Hadii aad u baahantahay cawimaad kale ama aad leedahay su’aalo ku saabsan habka xaqiijinta aqoonsiga, fadlan haka hakan in aad nala soo xiriirto support@transfergalaxy.com ama soo wacdo +46 10 410 29 00
Muddo intee ah ayey lacagta aan direy qaadanaysa in gaarto?
Lacag dirida adigoo isticmalaya TransferGalaxy markiba way gadhaysa mesha logu talo galay, mararka qaar wakhti bay qaadan, waxay ku xirantahy adeega aad doratay.
Waad arkaysa wakhtiyada lacag dirida adigo doranaya wadanka u diraysid iyo adeega ka hor inaad bixin lacagta.
Xarumaha lacag qaadashada: isla markiiba wa la helaya lacagta.
Lacagta Moobilka: markasta waa diyar iyo dhakhso.
Sidee ayaan u bixiyaa lacagta aan dirayo?
Waxaad ku bixin kartaa lacagta aad ka direysid TransferGalaxy adiga oo isticmaala kaarka(debit or credit card) wadanada ay adeegayaga laga helo.
TransferGalaxy waxay aqbashaa Visa, MasterCard iyo Maestro.
Markaad ku bixinayso kaarka deynta waxaa(Credit Card) laga yaabaa in lagaa qaado khidmad lacag caddaan ah markaa fadlan ka hubi bixiyahaaga kaarkaaga.
Hadii aan dhibaato la kulmo?
Waxaad halkan kala soo xiriiri kartaa kooxda cawimaadka macaamiisha TransferGalaxy idigoo u dirra E-meyl support@transfergalaxy.com, taleefanka +4610 410 29 00 ama Jaatka online-ka ah Isniin-Jimco 9-20, Sabti-Axada 12-18.
Waxaad wixii su'aal ah ku qori kartaa Web-siteka